ကိုရီးယားရုပ်ရှင်လောကမှာအနုပညာကြေးအများဆုံးရတဲ့ ကိုးရီးယားမင်းသားများ | Buzzy
မိန်းကလေးတွေ အသည်းစွဲ Kim Soo Hyun ပာာကြေးအများဆုံးနေရမှာ ရုပ်တည်နေပါတယ်။သူကို ဒရမ်မာ ဆီးရီးတွေထဲကနေလူသိများလာခဲ့တာပါ။ သူရဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ခန်းရိုက်ကြေးက ဒေါ်လာ ၈သောင်း၃ထောင့်၉ရာရှိပါတယ်။
နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ Hyun Binပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့တစ်ခန်းရိုက်စာ ရိုက်ကြေးပာာ ဒေါ်လာ 83900ဖြစ်ပြီး Khim Soo Hyun နဲ့တူတူပါပဲ။သူ့ကို ၁၉၈၂ စက်တင်ဘာလ ၂၅ရက်နေ့တောင်ကိုးရီးယားမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး အသက်၃၄နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့အရပ်ကတော့ ၁၈၀စင်တီမီတာရှည်ပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားမင်းသားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့Jo In Sung ကတော့တတိယနေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။သူ့ကို၁၉၈၁ခုနှစ် ဇွန်လိုင်လ ၂၈ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးယခုဆိုအသက် ၃၅နှစ်ရှိပါပြီ။ သူရဲ့ရုပ်ရှင် တစ်ခန်းစာ ရိုက်ကြေးတန်ဖိုးပာာ ဒေါ်လာ ၆၇၁၀၀ရှိပါတယ်။
နောက်ထပ်တစ်ဦးကတော့ So Ji Sub ဖြစ်ပြီး သူ့ကို၁၉၇၇နိုဝင်ဘာလ ၄ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ယခုဆိုအသက်၃၉နှစ်ရှိပါပြီ။သူရဲ့အရပ်ကတော့ ၁၈၅စင်တီမီတာရှည်ပါတယ်။ ၄င်းရဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ခန်းစာ ရိုက်ကြေးပာာဒေါ်လာ ၆၇၁၀၀ပဲဖြစ်ပါတယ်။
5. Lee Seung Gl
Lee SeungGl ကအဆိုတော်တစ်ဦးအပြင် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကိုတော့ ၁၉၈၇ ဇန်န၀ါရီလ၁၃ရက်နေ့မှမွေးဖွားခဲ့ပြီ ယခုဆိုအသက်၂၉နှစ်ရှိပါပြီ။သူရဲ့အရပ်ကတော့ ၁၈၀စင်တီမီတာရှည်ပါတယ်။၄င်းရဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ခန်းရိုက်စာ တန်ကြေးပာာဒေါ်လာ ၅၈၇၀၀ရှိပါတယ်။
လီမင်ဟိုပာာ မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့အပြင် ရုပ်ရှင်လည်းသရုပ်ဆောင်ပါတယ်။ F4ကားမှာသူ့ကိုပိုမိုလူကြိုက်များခဲ့ပြီးယခုဆိုအောင်မြင်နေတဲ့သရုပ်ဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို ၁၉၈၇ ဇွန်လ ၂၂ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးယခုဆိုအသက်၂၉နှစ်ရှိနေပါပြီ။သူရဲ့အရပ်ကတော့ ၁၈၇စင်တီမီတာတောင်ရှိပါတယ်။သူရဲ့တစ်ခန်းရိုက်စာတန်ကြေးကလည်း ဒေါ်လာ၅၈၇၀၀ရှိပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ Yoo Ar In ကို ၁၉၈၆ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာမွေးပြီး အသက်တော့၂၉နှစ်ရှိသွားပါပြီ။သူရဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ခန်းစာ အနုပညာကြေးပာာဒေါ်လာ ၅၈၇၀၀ဖြစ်ပါတယ်။
Lee JoungSuk ကို၁၉၈၉ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ ၁၄ရက်နေ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆုဝမ်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့အရပ်ကတော့၁၈၂စင်တီမီတာရှည်ပါတယ်။ သူရဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ခန်းစာ အနုပညာကြေးကတော့ ဒေါ်လာ၅၀၃၀၀ဖြစ်ပါတယ်။
9. Song joong Kl
Song JoongKl ပာာလည်းလူကြိုက်များတဲ့သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကိုတော့ ၁၉၈၅ စက်တင်ဘာ ၁၉ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့အရပ်ကတော့၁၇၅စင်တီမီတာရှည်ပါတယ်။သူရဲ့တစ်ခန်းရိုက်စာ အနုပညာကြေးကတော့ ဒေါ်လာ ၅၀၃၀၀ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Ji ChanWood ပာာလည်းဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့အသက်ပာာ ၂၉နှစ်ဖြစ်ပြီးအရပ်ပာာတော့ ၁၈၂စင်တီမီတာရှိပါတယ်။သူရဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ခန်းစာ အနုပညာကြေးပာာ ဒေါ်လာ၄၂၀၀၀ရှိပါတယ်။